आयोजक रातो सेमी फाइनलमा प्रवेश - प्रभात खबर
प्रभात खबर २७ कार्तिक २०७८, शनिबार २०:२४ मा प्रकाशित
इटहरी, कार्तिक २७
प्रथम दुहबी आमन्त्रण भेट्रान नकआउट फुटबल प्रतियोगिता २०७८ को शनिवार भएको पहिलो क्वार्टर फाइनल खेलमा कुलिफुयाङ्ग, बिराटनगर, मोरंगलाई ट्राइब्रेकरमा ४ —१ को गोल अन्तरले पराजित गर्दै आयोजक दुहबी भेट्रान क्लब रातो सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
पहिलो हाफको १५ औं मिनेटमा आयोजक दुहबी भेट्रान रातोको तर्फबाट खेलाडी जर्सी नं. १० खगेन्द्र घिमिरेले पहिलो गोल गर्दे आफ्नो टिमका लागि खाता खोल्न सफल भएका थिए तर पहिले हाफ कै २० औं मिनेटमा कुलिफुयाङ्ग भेट्रान क्लब बिराटनगरका खेलाडी जर्र्सी नं. ५० का महानन्द राजवंशीले एक गोल गर्दे खेललाई बराबरीमा टुङ्गाएका थिए।खेलको निर्धारित समय समाप्तिसम्म दुवै टिमको तर्फबाट थप कुनै गोल हुन सकेन र खेल ट्राइ बेक्ररतर्फ धकेलिएको थियो ।
पेनाल्टि सुटआउटमा आयोजक दुहबी भेट्रान रातोले कुलिफुयाङ्ग बिराटनगरलाई ३—१ को गोल अन्तरले पराजित गर्दै सेमीफाइनल खेलमा आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएको छ ।
खेल अवधिभर राम्रो खेल प्रर्दशनका लागि आयोजक दुहबी भेट्रान रातोका खेलाडी जर्सी नं. ८ दर्शन राई म्यान अफ दि म्याच घोषित भएका थिए । मनमोहन स्पोर्टस् एकडेमीका अध्यक्ष डा. सुभाष श्री पोख्ररेलले म्यान अफ दि म्याचलाई मेडल र नगद पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका थिए ।
दुहबी भेट्रान एफ.सी.को आयोजनामा प्रथम पटक सो खेल आयोजना गरिएको हो । स्वस्थ शरिरमा स्वस्थ मस्तिष्क हुन्छ, स्वस्थ मस्तिष्कबाट अनुशासित, मर्यादित, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नै ध्येयका साथ “ एक घण्टा व्ययाम, नागरिकहरुका लागि सुनौलो आयाम” भन्ने नाराका साथ दुहबी भेट्रान एफ.सी. ले दुहबीको इतिहासमा पहिलो पटक ४० वर्ष उमेर माथिका खेलाडीहरुलाई लक्षित गरि प्रथम दुहबी आमन्त्रण भेट्रान नकआउट फुटबल प्रतियोगिता २०७८ को आयोजना गरेको हो । सरस्वती मा.वि.को खेल मैदानमा हुन लागेको सो प्रतियोगितामा सुनसरी र मोरंग जिल्लाका १० वटा भेट्रान फुटबल टिमको सहभागिता रहेको छ ।
यस प्रतियोगिताको प्रथम नगद पुरस्कार राशि रु ५१ ह्जार रहेको छ भने उपविजेताले पाउनेछन् नगद पुरस्कार राशि रु ३१ ह्जार ट्रफि र मेडल । त्यसैगरि प्रत्येक खेलका म्यान अफ दि म्याचले पाउनेछन् नगद रु १ हजार भने प्रत्येक विधाका खेलाडीहरुले पाउनेछन् नगद रु २ हजार । भोलि आइतबार हुने दोस्रो क्वार्टर फाइनल खेल बिराट बुद्घ भेट्रान क्लब,मोरंग र जनता भेट्रान क्लब इटहरी, सुनसरी बिच हुने जानकारी दुहबी भेट्रान क्लबका सचिव दुली चन्द चौधरीले दिएका छन् ।
सरस्वती मा.वि.को खेल मैदानमा सञ्चालन हुने सो प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारण Nepal Prabhaat Khabar2 बाट गरिदैछ ।